Igbo, Romans, Lesson 006 -- Paul’s Longstanding Desire to Visit Rome (Romans 1:8-15) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 006 (Paul’s Desire to Visit Rome)
NDI ROM 1:8-12
8 Nke mbu, ana m ekele Chineke m site na Jizọs Kraịst maka ụnụ niile, na a na-ekwupụta okwukwe gị n'ụwa niile. 9 N’ihi na Chineke bụ onye akaebe m, onye m ji mmụọ m na-eje ozi n’ime ozi ọma nke Ọkpara Ya, na n’echeghị m anya, m na-echeta gị oge niile n’ekpere m, 10 na-arịọ ma ọ bụrụ na n’ụzọ ụfọdụ, ugbu a, enwere m ike ịchọta ụzọ. n’uche Chukwu abiakute gi. 11 N’ihi na agu n’agu gi ike, ka m’we nye gi onyinye ufodu nke Mọ Nsọ, ka ewe guzosie ike - 12 ya bu, ka ewe gba m ume site n’etiti unu site na okwukwe nke mu na gi.
Pol nụrụ ọtụtụ ihe banyere ụka Rom, zute ụfọdụ ndị otu ya n'oge njem ozi ala ọzọ ya, wee chọpụta na okwukwe ha bụ eziokwu, dịrị ndụ ma tozuo oke. O kelere Chineke jiri obi ya niile rụọ ọrụ ebube a, maka na Onye Kraịst ọ bụla dị ndụ bụ ọrụ ebube nke idozigharị n’ime Kraịst, nke njirimara ya chọrọ ikele anyị. N’ebe obula n’otu na-ejere Chineke na Okpara isi na Mmuo Nso, anyi aghaghi ife Nna m ofufe, too ya ma rejoiceuria n’ime ya ehihie na abali.
Pol kpọrọ Chineke “Chineke m’’, nte n̄kpọ eke enyenede eke esie. Ọ maara na ọgbụgba ndụ ọ bụla nwere mkpụrụ obi ọgbụgba ndụ ya, ọ hụkwara ya n'anya n'eziokwu. Mana na mmekorita di nma a, o kpesighi ekpere nye Chineke di elu n’aha nke aka ya, kama o bu n’aha nke Kraist, na-amara na aririo anyi niile, na ekele anyi, ekwesighi ka enye ha otuto nye otuto nke Chukwu. Nsachapụ nke obi anyị nile chọrọ ike nsachapụ nke ọbara nke Jizọs Kraịst. Nani site na mkpocha a, anyi puru ikpegara Chineke, Onye n’enye anyi mmuo ya ike, ka anyi doo aha nna ya nsọ, were fee ya onu. Ndi-oru-ya nile dị nsọ nye ya, ha bụkwa nke ya dị ka ndị ohu nke ịhụnanya Ya.
Ọdịnaya nke ọrụ ha bụ Ozi Ọma. Anyị na-achọpụta na Pọl, n'amaokwu nke mbụ nke akwụkwọ ozi a, kwusara ozi ọma dị ka "ozi ọma nke Chineke", ebe n'amaokwu 9 anyị gụrụ "ozi ọma nke Ọkpara Ya". Site n'okwu a, oputara na ozi oma nke nzoputa si na nkpuru nke Okpara Chineke puta. Ebumnuche niile nke Pọl na-atụgharị bụ nwa Kraịst na ịbụ Nna nke Chineke. Onye ọ bụla gọnarịrị ozi ọma a nke ọma, ma jụ ịmachara anya bụrụ onye a bụrụ ọnụ.
Pol okodụk ndụk nsan̄a ye Nna, Ọkpara, na Mụọ Nsọ na-akpakọrịta. Ọ kpọrọ ịdị n'otu nke Chukwu-Nsọ iji gbaa akaebe na ya na-eche ụka ụka Rom na-ekpe ekpere maka ya. Onyeozi nke mba echefughi ụka nile n'agbanyeghị ọtụtụ ọrụ aka ya, ma kpekwaara ndị mmadụ n'otu n'otu ekpere. Onwebeghi onye ọzụzụ aturu kwesiri ntukwasi obi, ma obu onye nchu aja nke enyere ike nke Mo Nso, ewezuga site na ikpe ekpere. N’ebe ike siri n’onodu mmadu puta, ihe gha aghaghi ibu ihunanya, ekpere, na inya Chineke na ndi mmadu.
Pol ama ama uduak esie ndise Rom ke ediwak isua, akpan akpan ke ini emi enye okokotde “ke emi,” edi ini oro enye akanamde utom ke Anatolia, Macedonia, ye Grice. Ọ hụrụ na oge eruola iyi akpụkpọ ụkwụ Italiantali.
Agbanyeghị, o kpebie iwere njem ya dịka uche ya na atụmatụ ya siri dị. O lebara anya mgbe nile ime ka onwe ya dika uche Chineke si di, na-eburu n’uche n’echiche nke mmadu imebeghi onwe ya, n’enweghi nkwekorita, n’eduba odida, nsogbu na nsogbu. Pol abụghị onye mkpọrọ nke ọchịchọ na ọchịchọ nke ya, kama o mere ndokwa ihe niile kpam kpam n'okpuru nduzi nke Nna ya nke eluigwe.
Otú ọ dị, nrubeisi a egbochighị nnukwu ọchịchọ o nwere ịga na chọọchị dị na Rom, ebe ọ na-adịbeghị. Ya onwe ya mara na O juputara na Mo Nso. O di ka ugwu mgbawa na-atuba ike nke Chineke n’ebe nile; ya mere, ọ chọrọ ime ka ụlọ ụka Rom bụrụ onye mmekọ na ikike nke Kraist nyere ya, ka ụka wee nwetaghachi, kwadebe maka ọrụ, ma guzobe n'ịhụnanya, okwukwe na ezi olile anya. Nka bu ihe nlere anya nke ozi na isi ihe omume nke ndi ozi: ka ewe me ka ndi kwenyere na nbulite ike.
Pol achọghị ịbanye Rom dị ka onye na-enye onyinye, mana o wedara onwe ya ala nke ukwuu, wee dee na ọ bụghị naanị inye ihe, kama ka ọ were ntị na ịhụ ụzọ. O mere nke a ka o wee hu ihe Chineke mere n’enweghi ndi kwere ekwe n’obodo a ka ha kasie ha obi na ndi ozi niile site na akaebe nke onye nkasi obi nke Chineke n’onodu ndi Rom.
Pol gbara akaebe tupu oge eruo, na o jighi okwukwe ọhụụ abịa, kama na otu nkwenye ahụ, ihe ọmụma, na ike na-arụ ọrụ na ezi Ndị Kraịst niile, ndị bụ akụkụ nke ahụ nke mmụọ. Onye obula nke na-ekwu na ihe kariri otu uka bu onye ugha, nihi na Mo Nso bu otu, Kraist bu otu, Nna di otu. N'ebe ọ bụla ndị kwere ekwe kwesịrị ntụkwasị obi zukọrọ, ha na-ezukọta dị ka ụmụaka nye otu Nna, ọbụlagodi na ha amataghị ibe ha tupu mgbe ahụ. Ha na-a rejoiceụrị ọ greatlyụ nke ukwuu, na-ezukọkwa n'otu obi, dị ka amụrụ site na otu mmụọ, nke nwere otu ezinụlọ, ma jikọta otu ụkpụrụ na mmasị.
EKPERE: Nna, anyi na-efe gi ofufe, n’ihi na you na-achikota uka gi n’uwa nile, ma guzosie ike, were juputa agwa gi. Kụziere anyị ikpe ekpere maka ụmụnna anyị nọ ebe niile. Daalụ maka ụmụ gị kwesịrị ntụkwasị obi, n'ihi na onye ọ bụla amụọrọ gị na mmụọ nsọ bụ ọrụ ebube. Meghee anya anyị ka anyị hụ onwe anyị n'anya ma ghọta onwe anyị, andụrịakwa ọ yourụ n'ihu gị. Nye anyị amamihe na mgbaghara ka mmekọrịta anyị wee jupụta ma debe ya n’ezi eziokwu gị, ka anyị wee ghara isi n’etiti anyị, Ọkpara, na Mụọ Nsọ wezuga onwe anyị.
Gini mere Paul ji kelee Chineke oge niile?
Page last modified on January 25, 2021, at 05:25 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)